Hd guard ဆိုတာဘာလဲ? — MYSTERY ZILLION
Hd guard ဆိုတာဘာလဲ?
- HD GUARD ဆိုတာ လက်ရှိ Windows နှင့် Software Setting များကို Default အဖြစ်မှတ်ထားပေးသော Software ဖြစ်သည်
- သင့်စက် Restart ပေးလိုက်ပါက ၄င်း မှတ်ထားသော default settings ကို ပြန်ခေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်
- သို့အတွက် Desktop နှင့် C ထဲတွင် ဖိုင်များကို မ Save ဖြစ်ရန်သတိထားရမယ်
တကယ်လို့ Save မိပါက ပြန် Recover ခေါ်လို့ရမယ် မဟုတ်.
( သတိပေးချက် )
သင့်စက် Model အောက်ပြီး Windows အတက်ကြာပါက လုံး၀မတင်ပါနှင့်
1. Software မတင်ခင် c ထဲကို Hdguard.ser ကို copy ကူးပေးပါ.
2. နောက် Software တင်ပါ.
3. Software တင်ပြီးပါက Restart ကျလာလိမ့်မယ်
နောက်စက်ပြန်တက်လာပါက Licensing ထည့်ရမယ့် အဆင့်ကိုရောက်လာလိမ့်မည်.
( ဒီ Serial Number သည် စက်အလုံး 50 အသုံးပြုနိုင်သည် )
4. Licensing အဆင့်ရောက်ရင် Licensing အောက်က Licensing Key အကွက်နားက မှန်ဘီလူးပုံလေးကို click လုပ်ပေးပါ.
(သူ့ဘာသာသူ license key ရှာထည့်ပေးပါမယ်)
5. ဒီ Software အတွက် Password ထည့်ပေးပါ.
6.ထို့နောက် HDguard Swap File ကို C မှာရွေးပေးပါ.
(harddisk size ၏ ထက်၀က်ကျော်လောက် နေရာပေးပါ)
အခုဆို HD Guard တက်လာပါပြီ အစိမ်းရောင်လေးနှင့် အလုပ်လုပ်နေပြီ.
တကယ်လို့ Software တင်ချင်, Fonts ထည့်ချင်, Default Settings ပြောင်းချင်ရင်
HDguard ကို Right Click ထောက်ပြီး Setting ကိုနှိပ်ပါ
နောက် password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Deactivate လုပ်ပေးပါ.
ပြန်တက်လာသောအခါ Hdguard ပိတ်နေမယ်
ဒီအချိန်မှာ လုပ်ချင်သည့် သွင်းချင်သည့် sotware များကိုသွင်းထားပါ.
ပြီးသွားပါက Activate ပြန်လုပ်ပေးပါ.
Default Settings အဖြစ်မှတ်ထားပြီး
( Virus တက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်, ဆော့၀ဲError တက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် restart ပေးလိုက်ပါက
၄င်းမှတ်ထားသည့် Default Settings ကိုပြန်ခေါ်မည်ဖြစ်ပါသည် )
software link လေးလုပ်ပါဦး... အစ်ကိုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်....:D:D
မေးချင်နေတာကြာပြီဗျ HDguard နဲ ့deepfreeze ဘယ်ကောင်ကောင်းလဲဗျ
ကျွန်တော်တော့ hdguard ၇ယ် deepfreeze ရယ် နှစ်ခုလုံးသုံးဖူးပါတယ် နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေ
ဆောရီး ဖောတာများလွန်းလို့ ဆော့၀ဲလ် link ပေးဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့ပီ..သီးခံပါခင်ဗျာ..
.....D O W N L O A D I N G.....
ကျနော်ကတော့ DEEPFREEZE ကိုဘဲ ပိုကြိုက်တယ်ဗျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD Guard က ကြာရင် performance ကျလာတယ်.....ဒါပေမဲ့ DEEPFREEZE ၂ လလောက်ကြာရင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုပြန်ပြီး CRACK ပြန်လုပ်ပေးရင် ရပါတယ်
DeepFreeze နဲ့HD-Guard တို ့ရဲ ့ကွာခြားချက် အားနည်းချက် အားသာချက်လေးတွေကိုလည်းသိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ
အစ်ကို link လေးပြန်စစ်ပေးပါလား error တက်နေလို့ :O
အကယ်၍ ပြန်ဖေါက်မယ်ဆိုရင်ကော Hd guard နဲ့ Deep freeze နဲ့ ဘယ်ဟာက ပိုလွယ်ပါသလဲ.. (Admin password မေ့သွားတာမျိုးဆိုရင်ပေါ့ )
handy cafe တင်ထား၇င် လဲprocess မှာhdguard ဆိုတာrun နေတယ်ဗျာ
deepfreeze ကျွန်တော်တင်ထားတာ ၂နှစ်ကျော်ပါပြီ ဘာ error မှမတက်ပါ။ Crack လည်းမလိုပါ။ Vista ထိ support လုပ်ပါတယ်။ deepfreeze က computer ကိုမလေးစေပါ။ HD Guard က swap နည်းရင်နှေးတယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ ကျနော်ထင်တယ် format ဘဲ ပြန်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးဘဲလို့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ uninstall လုပ်ဘို့အတွက် password ခံထားရင် အဆင်မပြေဘူးလေ အခုလိုမေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ မလွယ်ဘူးလို့တော့ထင်တာဘဲ buddy ကလဲဗျာ........
HD Guard အတွက်တော့မသိဘူး Deep Freeze အတွက် Unfreezer တွေရှိတယ်လေ
Unfreezer တော်တော်များများက အသုံးမတည့်တာတွေများတယ်ဗျ.. လက်တွေ့အသုံးဝင်တဲ့
အမ်ဖရီဇာ လေးများရရင်တော့ လိုချင်သားဗျာ...
I use deepfreeze standard.
It works on XP & Vista.
Easy to use , light.:)
လင့်ခ်ကို Rapidshare မှာတင်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျ။
အော်..ပိုက်ဆံရှိတဲ ့သူတွေများ Rapid share မှာတောင်တင်ခိုင်းရက်တယ်နော်..
ဟင် ့ဟင် ့ဟင့်:2::2::2: လုပ်ကြပါ နင်က သူငှေးဆိုတော ့.အဟင် ့
Rapid account သုံးခုတောင်ရှိတယ်ဆိုတော ့..အဟင် ့..လုပ်ပါ..လုပ်ထားပါ။
ဟဲ့ Account ကသုံးခုရှိတော့ဘူး၊ တစ်ခုကရောင်းလိုက်ပြီ အဟီး။
File Sharing Site တွေက Resume မပေးတာတို့၊ Download Accelerator တွေကို Support မလုပ်တာတွေရှိတော့ နာလဲ နာ့Account ရှိတဲ့ RS ကိုတောင်းရတော့တာပေါ့ဟ။
နင့်မှာလဲ Account ရှိတာပဲ.... ဟွန်း
နင်ကပိုတောင် သူဌေးသေးတယ်... အိမ်မှာ Internet ADSL 512 ကို တစ်ယောက်ထဲသုံးတာ...